फिल्म क्षेत्रमा प्रवेश गर्दा ‘यौ’न उ’त्पी’डन भोग्न परेको थियो : प्रकृती श्रेष्ठ ! – Khabar28media
फिल्म क्षेत्रमा प्रवेश गर्दा ‘यौ’न उ’त्पी’डन भोग्न परेको थियो : प्रकृती श्रेष्ठ !
चलचित्र ‘होस्टेल’बाट नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा प्रवेश गरेकी नायिका हुन् प्रकृती श्रेष्ठ । उनले चलचित्र ‘जिन्दगी रक्स र उत्सव’मा काम गरिन् । यसपछि, बिहे गरेर अष्ट्रेलिया पुगेकी प्रकृती केही बर्षपछि चलचित्र ‘बिहे पास’बाट कमब्याक गर्दैछिन् कमब्याक गर्दैछिन् **भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोस्**।
उनैले सामाजिक संजाल इन्स्टाग्राममा आफ्ना फ्यानको प्रश्नको उत्तर दिने क्रममा आफूले चलचित्र क्षेत्रमा ‘यौ’नउत्पी’डन भोगेको बताएकी छिन् । एक फ्यानको प्रश्नमा उनले चलचित्र क्षेत्रमा प्रवेश गर्दाको सुरुवाती दिनमा आफूले यस्तो समस्या भोगेको बताइन् । प्रकृतीले यस्तो गलत कुराको बिषयमा बोल्न आफू नडरा’एको पनि बताएकी छिन् । आफू वा अरु कोहीलाई ती व्यक्तिहरुले फेरि यस्तो गलत ह र्कत नगरुन्भ न्ने सोचेर आफू बोल्न नड राएको प्रकृतीको भनाई छ ।
अर्का एक फ्यानले प्रकृतीलाई आमा कहिले बन्नुहुन्छ भनेर पनि सोधेका छन् । जसमा प्रकृतीले आफूलाई सही समय आएको भन्ने लागेपछि यसतर्फ सोच्ने बताएकी छिन् । उनले, आफूलाई पहिलो बच्चा छोरी र दोश्रो बच्चा छोराको चाहना भएको पनि खुलाएकी छिन् । नायिका प्रकृती श्रेष्ठ चलचित्र ‘बिहे पास’को छायांकन सकेर अष्ट्रेलिया फर्किसकेकी छिन् । **भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोस्**
अर्को खबर तल छ :-
मे २६ बुधबार चन्द्रग्रहण लाग्दैछ । यो पटकको चन्द्रग्रहण निकै महत्वपूर्ण र विशेष छ । किनकि यो चन्द्रग्रहणका क्रममा विश्वका विभिन्न भागबाट रातो चन्द्रमा देखिनेछ । रातो देखिने चन्द्रमालाई सुपर ब्लड मुन भनिन्छ । यस विषयमा जानकारी दिँदै अमेरिकी अन्तरिक्ष एजेन्सी नासाले भनेको छ ‘२६ मे मा चन्द्रमाको पूरै भाग पृथ्वीको छायामा पर्नेछ । अनि जुनबेला चन्द्रमामा पृथ्वीको छाया परिसकेको हुँदैन, त्यसबेला चन्द्रमा पहिलेभन्दा ठूलो तथा चम्किलो देखिने छ ।
सुपर मुन यस्तो खगोलीय घटना हो जहाँ चन्द्रमा पृथ्वीको सबैभन्दा नजिक आउँछ । सोही कारण चन्द्रमा अन्य समयमा भन्दा ठूलो आकारको र १४ प्रतिशत धेरै चम्किलो देखिन्छ । त्यसलाई पेरिगी मुन पनि भनिन्छ । चन्द्रमा वा कुनै पनि प्राकृतिक उपग्रहहरू पृथ्वीको सबैभन्दा नजिक आएको अवस्थालाई पेरिगी भनिन्छ भने सबैभन्दा टाढाको अवस्थालाई अपोगी भनिन्छ । चन्द्रमालाई सुपर मुन तब भनिन्छ जब चन्द्रमा पृथ्वीबाट ३ लाख ६० हजार किलोमिटर वा त्यसभन्दा पनि कम दूरीमा हुन्छ । २६ मे को दिन पेरिगीको स्थिति करिब ७.२३ मिनेट रहनेछ र त्यतिबेला चन्द्रमा पृथ्वीबाट ३ लाख ५७ हजार ३०९ किलोमिटरको दूरीमा हुनेछ ।
कतिपयले सुपरमुनका कारण पृथ्वीमा विभिन्न खालका प्रभाव पर्ने र यस्तो बेला भूकम्प, ज्वालामुखी, सुनामी, बाढी वा मौसमी गडबडीका घटना हुने अनुमान गर्दछन् । तर वैज्ञानिकहरुका अनुसार यस्तो दाबीको कुनैपनि प्रमाण छैन । यद्यपि चन्द्रमाको असरले समुद्रमा ज्वारभाटा चाहीँ अवश्य हुन्छ र पूर्णिमाको समयमा समुद्रमा ज्वारभाटा झनै तिव्र हुन्छ । तर पेरिगीको स्थितिमा पनि समुद्रमा उठ्ने ज्वारभाटामा खासै ठूलो परिवर्तन हुँदैन ।
Previous Article राति निद्रा नलागेर छटपटी भयो ? सुत्नुअघि श’रीरको यो भाग थिचे निद्रा लाग्छ ।
Next Article काठमाडौं वासीहरुका लागि आयाे खुसीको खबर, बल्ल केहि आशा पलायो !